URenshi Guang ovela kwiNewsill, sivavanye le mpuku kubadlali | Iindaba zeGajethi
Abadlali bebhola ekhatywayo baya beba neebhutsi eziyilwe ngcono, benesayensi eninzi emva kwabo. Kukwanjalo nangeebhayisekile zabahambi ngebhayisikile kunye nezokudada kubantu abadada. Nangona kunjalo, I-eSports ikwafuna umngxunya wabo omncinci kwi-R & D kwaye ayinakuba ngaphantsiKukho iimveliso ezininzi ezisebenzayo ukunceda abadlali ukuphucula izakhono zakho.
Namhlanje sinamava e Newskill, isixhobo esiza kusihlalutya namhlanje yiRenshi Guang, imouse entsha ungumdlali kwinkampani eza kufumana okuninzi kuwe. Hlala wazi ukuba ziintoni iimpawu kunye nobuchule bale mpuku intsha.
Njengesiqhelo, siza kuhlalutya uthotho lweempawu ezinje ngoyilo, izixhobo kunye nokusebenza, kwaye sisebenzise isalathiso esihlala sikushiya ungakhawuleza uye kwicandelo elibonakala lilungele wena. Ngaphandle kokulibaziseka, masihambe.
1 Newskill, singathini malunga negama
2 Iimpawu eziphambili zobugcisa
3 Umgangatho wezinto kunye noyilo
4 Isoftware yokwenziwa kwakho
5 Iziqulatho zebhokisi, ixabiso kunye nendawo yokuthenga
Newskill, singathini malunga negama
Ekupheleni kuka-2015 kwafika iNewskill, uphawu olwalufuna ukutshintsha indlela eli gama ngayo midlalo yayisetyenziswa ukuza kuthi ga ngoku kwizixhobo ezininzi zekhompyutha. Uninzi lutsibe kule bandwagon ngaphandle kokubonelela ngalo naluphi na uhlobo lwento enokuthi inyuse ngokwenene okanye iphucule amanqaku esele enawo. Injongo yemveliso midlalo Kukukhupha la mandla, ukwenza ukuba umdlalo ophuculweyo ukhululeke ngakumbi ekusebenziseni umsebenzi wakhe. Olu hlobo luza kukhuphisana ngokuthe ngqo nezinye izinto ezinje Razer y Zona, kwaye kakhulu iyenza. Ukuza kuthi ga ngoku bazuze ukwamkelwa kwabadlali abaninzi, ubuncinci abo baqala, enkosi kubukho babo rhoqo kwiiPC PC.
Iimpawu eziphambili zobugcisa
Enye yezinto ezigqwesileyo koku URenshi Guang kukuba ine IPixart 4460 inzwa yokubonakalayo ukuya kuthi ga kwi-16.000 DPI, ayikho enye into kwaye akukho nto ingaphantsi. Le nzwa ingcwalisiwe, kwaye iingcali ezininzi kunye nabalandeli bentsimi bayazi kakuhle. Ngale ndlela, iyakwazi ukumelana ne-50G yokukhawulezisa kunye nee-intshi ezingama-250 ngomzuzwana. Umdibaniso ogqibeleleyo ukuze ukuchaneka kungabi yingxaki xa kuziwa ekuvuneni impumelelo. Ewe kuya kuxhomekeka ezandleni zakho ukubetha ekujolise kuko okanye hayi.
Inamaqhosha amathandathu oomatshini, akukho bamba okanye inkqubo efanayo. Kwangelo xesha, ineeprofayili zesoftware ezinokuqwalaselwa: I-FPS, iMMORPG, iMBA kunye neRTS. Izinga lokuvota li-1000 Hz / 1ms, Ikwatyhila amandla ayo obuchwephesha. Ngokubhekisele kwintambo ye-USB, yigolide evaliweyo yokuqinisekisa umgangatho ophakamileyo kuthumelo lwedatha, ngelixa intambo ebonakalayo igqunywe ngefayibha eboshiweyo, esisinika yona ubude beemitha eziyi-1.8, asiyi kuba neengxaki nokuba iPC yethu ibekwe phantsi okanye etafileni okanye edesikeni.
Isantya esiphezulu esifikelela kuso yi-250 IPS, Ngelixa lakhe ukukhawulezisa okuphezulu kufikelela kuma-50G. Imilinganiselo yayo ethile I-126 x 68 x 39 yeemilimitha, kwaye inobunzima be-130 yeegram. Ngokucacileyo iyahambelana nawo onke amaqonga eWindows anje ngeWindows 2000, XP, Vista, 7, 8 kwaye kunjalo Windows 10, oyintandokazi yabadlala umdlalo okwangoku.
Umgangatho wezinto kunye noyilo
Ngokukhawuleza xa uyikhupha ngaphandle kwebhokisi, uyaqonda ukuba awujongi nayiphi na imouse. enjalo Inesambatho sendalo yerabha kumphezulu wonke. Le touch yerabha yendalo isinika intuthuzelo kunye nococeko, sinokuthi indawo yokunxibelelana izinze ngokwaneleyo ukuba siziva sikhululekile ngexesha leeyure ezinde zemidlalo yevidiyo. Ngendlela efanayo, intambo, njengoko besesitshilo, inesambatho esukiweyo sefayibha esiqinisekisa umgangatho kunye nokuqina. Ngokuqinisekileyo, ubunzima be-130 gram yanele ukuba siziphathe ngokukhawuleza.
Nangona kunjalo, asifumananga ubugqwetha nokuba, uyilo lweklasikhi oluziqhelanisa nesandla, lutofotofo, kodwa alushiyi mbonakalo emangalisayo nokuba. Umboniso uphethe ii-RGB ze-LEDs ezikwaziyo ukunikela ngemibala ezizigidi ezili-16,8. Isitshixo kwii-LEDs kunye nokuchonga ukuba zeziphi iiprofayili zesoftware esinazo ngalo mzuzu. inyani kukuba ishiya imvakalelo midlalo, Sibona ukukhanya kudlula zombini ilogo yenkampani kunye nevili, kwaye iya kuqala ukuqaqamba xa sishiya imouse iphumle.
Izitshixo zinokuhamba ngqo, ezimbini kwicala lasekhohlo Baya kusinceda ukuseka naluphi na uqwalaselo esilufunayo, banokuchasana okufanelekileyo kunye nokuhamba ukuze singabacinezeli ngempazamo. Amaqhosha esenzo sasekhohlo nasekunene ukuba "bathambile" kakhulu, oku kungasebenza endaweni yethu ebusweni bekhosi yayo emfutshane kwaye kuya kuba lula kangakanani ukwenza isenzo, nangona kunjalo, inokudlala iqhinga kuthi de siqhelane nayo. Ukujonga ivili, ikwanombathiso werabha wendalo kunye neqhosha, ichanekile kwaye isinika ukumelana okwaneleyo ukuze sikwazi ukuhamba kwiimenyu zomdlalo kakuhle.
Emazantsi sineepads ezintathu kwindawo ephezulu embindini, kwaye ngasezantsi ngasekunene nakwiindawo zasekhohlo. Ezi pads ziyatshintshana xa zinxityiwe, iNewskill ingathanda ukufaka ezinye kwiphakheji. Ngelixa i-sensor eyi-16.000 ye-DPI inesimo esiphakathi. Okokugqibela, kwinxalenye ephezulu ngaphambi nje kwevili sinenkinobho yokufikelela ekhawulezayo eya kusivumela ukuba sitshintshe ngaphandle kokulahla isenzo phakathi kweeprofayili zomdlalo ezine esizilungiselele kwisoftware, esiza kuthetha ngayo ngokulandelayo.
Isoftware yokwenziwa kwakho
Isoftware eyilwe kakuhle ayinakuphuthelwa ukuze sifumane okuninzi kule mpuku, inesoftware ekhethekileyo yokuqwalasela imouse yakho yemidlalo njengoko ilungele imowudi yakho yomdlalo. Ukusuka kwi-Backlight, ii-macros, iiprofayili ezahlukeneyo ngovakalelo, I-DPI okanye isantya sokulinganisa, sinokulungiswa ngokupheleleyo, oko ke kubonelela ngamathuba angenasiphelo. Sisebenzise kwaye inyani kukuba inomdla kwaye iyimfuneko ukuba sifuna ukukhama ijusi kule mpuku, into edibanisa iimveliso midlalo mva nje.
Iziqulatho zebhokisi, ixabiso kunye nendawo yokuthenga
Umxholo webhokisi uyamangalisaI-Newskill iyabancoma abathengi bayo kakuhle, siza kufumana iipads ezimbalwa zokubuyisela endaweni, ipowusta yeNewskill enamabinzana ayintsomi kwimidlalo yevidiyo, umxhoma emnyango ukuze alumkise xa sidlala, ikhadi lolwazi, izitikha, ikhadi leNewsill VIP kunye nokuthwala okuthambileyo. ibhegi. Ndimele nditsho ukuba bendikuthanda kakhulu ukupakisha, kwaye ndiyayixabisa.
Ungayithenga nge iwebhusayithi yabo nakwiAmazon nge € 49,95 nge LONTO. Njengoko unokulindela kwimveliso enjalo, sinesiqinisekiso seminyaka emibini, nangona kunjalo iNewskill isinika isiqinisekiso sokubuyiselwa imali seentsuku ezingama-31.
Ngokwam, ndizifumene ndikhululekile, ndiyifumene imouse echanekileyo, enomgangatho wokwakha omangalisayo, olinganayo kwixabiso kunye nomgangatho. Mhlawumbi elinye iqhosha lilahlekile, okanye uyilo olungqongqo, kodwa iNewskill apha ibikhathalele ngakumbi ukusinika imveliso esebenzayo.
Elinye iqhosha lilahlekile
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » URenshi Guang ovela kwiNewsill, sivavanye le mpuku kubadlala umdlalo
Uyazi njani ukuba ngubani otyelela i-Facebook yam